IBluewater B & B ~ "Ndise elwandle"
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguPatricia
IBluewater Bnb yindlu yabalobi bokuqala kwindawo ezolileyo nekhuselekileyo.
I-400mtrs ukuhamba ukuya elunxwemeni, ukufikelela kwi-2, uya kuba kolona lwandle lubalaseleyo e-WA.
Ibekwe kwindawo esembindini, umgama wokuhamba kuzo zonke izinto eziluncedo edolophini.
Indawo yakho yabucala enezixhobo ngokupheleleyo kumgangatho osezantsi. Akukho zitephusi ngaphakathi. Ndikumgangatho ophezulu.
Indawo yakho yokupaka, ukungena kwabucala ukusuka kwipatio.
Ikhitshi eligcweleyo. Indawo yokutyela, igumbi lokuphumla, elinendawo yokufudumeza okanye yokupholisa. Enye iQueen bed. Iingoma ezingatshatanga ezi-2, zenza ibhedi yenkosi.
IBluewater Bnb ibonelela ngendawo yokuhlala ekhuselekileyo, ephumlayo, enoxolo kwaye ekhululekile. Ifanelekile kwiNkampani, i-solo, izibini kunye nabahambi bosapho. Unayo yonke indawo kuphela nomntu ohamba naye. Ukungena kwakho okukhuselekileyo kunye nokwangasese kufikeleleke kwi-patio. Oku kujonge imoto yakho, umphambili wendlela kunye neegadi. Kukho ibhokisi etshixiweyo yesitshixo okanye, ukuba kufanelekile, ndiza kukubulisa xa ufika.
Kukho isethingi yangaphandle kunye nebarbecue yokutyela ngaphandle. Ipaki ethandekayo kunye nebala lokudlala labantwana abangaphaya kwendlela. Iibhedi ezintle ezintle kunye nelinen esemgangathweni kunye neetawuli. Omabini amagumbi abonelelwe ngeegawuni ezimhlophe ezimfumamfuma zokuzipholela. Igumbi lokumkanikazi elinye, elinye lizimbini ezongezelelweyo ezinde eziguqukayo zibe yibhedi yokumkani kwizibini ezihambayo. Ukuba uhamba nomntwana osemncinci / umntwana, kukho i-porta-cot kunye nesitulo esiphezulu. Iitawuli zaselwandle zikhona.
Isidlo sakusasa selizwekazi esinesonka esitsha. Amanzi okusela ahluziweyo anikwayo. Iiti, umatshini weNespresso DeLonghi, iipod zekofu kunye nezinye iziqholo zibandakanyiwe. Ikhitshi linompheki werayisi, umpheki ocothayo, iipani, itoaster, iketile, imicrowave, i-oveni enobungakanani obugcweleyo kunye nesikhenkcisi. Zonke izixhobo zokupheka kunye ne-blender. Kukho iTV enkulu eneChromecast ukuze uqhagamshele iNetflix yakho njl. Kukho iWi-Fi yasimahla apho igama lokugqitha liya kunikwa wena ekufikeni kwakho.
Igumbi lokuhlambela liquka ishawari kuphela, indlu yangasese ikwigumbi lokuhlamba impahla. Zonke izibonelelo zegumbi lokuhlambela zibonelelwa nesomisi seenwele. Kukho umatshini wokuhlamba iimpahla (ngesicelo kuphela) kunye nesomisi sempahla oza kusisebenzisa. Ukuhlamba umgubo kwakhona.
Ime ngokufanelekileyo, uhambo olufutshane ukuya elwandle ukuya kuloba, ukuqubha okanye ukonwabela ukuhamba ngendlela evalwe kakuhle okanye elunxwemeni. Kukho i-trolley yolwandle yokukhwela zonke izixhobo zakho zaselwandle, iwayini, i-snacks, iitawuli njl.njl. Indlela evaliweyo ikhokelela kwi-Jetty kunye nezinye iivenkile, ii-cafes njl njl. Kwakhona ihamba yonke indlela eya kwi-marina, ehamba ngasenyakatho. Ukuya emazantsi, kukuthatha kuhambo kunye neelwandle ezicocekileyo ukuya e-Hill River.
IBluewater Bnb ikufuphi nedolophu apho kukho ukhetho olukhulu lweekhefi, iivenkile zokutyela, iibhanki, ukuthatha ukutya, ivenkile enkulu kunye neZiko labatyeleli laseTurquoise Coast. Apha, ungabhukisha ukhenketho lwakho - iDrovers Caves, ukhenketho lwesikhephe ukubona amatywina, iPinnacles Desert kunye neSandy Cape, ukukhankanya ezimbalwa. IJurien Bay ikufutshane nazo zonke ezinye iidolophu ezincinci eziselunxwemeni ezibonelela ngeendlela ezahlukeneyo ezinomtsalane.
Ngamanye amaxesha ukuphuma kade kunokufumaneka, nceda ubuze.
32" TV ene-I-Chromecast
4.99 ·Izimvo eziyi-119
IBluewater Bnb ibekwe kwindawo ezolileyo kakhulu yedolophu.
Ibekwe ngaphakathi kwimizuzu yokuhambahamba ukuya kwipaki ethandekayo-ibala lokudlala kunye nokuhamba nge-400 mtr ukuya kwiilwandle ezithandekayo zeJurien Bay.
Izinto eziluncedo zasedolophini zonke zikumgama wokuhamba.
Kukho iindlela ezi-2 zokufikelela elunxwemeni, ngokwenene ikwindawo eyodwa.
Yonwabela ukuhambahamba ekuseni ecaleni kolwandle, ujonge indlela eya eJetty, ipaki yokutyibiliza kunye nebala lokudlala labantwana elimangalisayo.
Ukusuka apha, kukho okwaziwayo, iJurien Bay Bakery, iikhefi, iSandpiper Tavern, iMurray Street Grill nokunye.
Khetha indlela ekhokelela elunxwemeni ukutshona kwelanga okuthandekayo.
Iindlela ezitywiniweyo nezikhuselekileyo ezisuka kwiBnb yethu, zikukhokelela edolophini, nakunxweme lonke lweJurien ukuya kutsho eHill River.
Ukuba ndisekhaya, ndiyathanda ukwamkela iindwendwe zam kwaye ndizenze zizive zisekhaya. Ndiyayihlonipha imfihlo yeendwendwe zam. Ndiyafumaneka nanini na, ukuba kufuneka. Ndiyavuya ukukwazisa ngayo nayiphi na imitsalane ongathanda ukuyindwendwela. Ekubeni ndihlala apha eJurien ixesha elininzi lobomi bam, ndinolwazi oluninzi ngazo zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi.
Ukuba ndisekhaya, ndiyathanda ukwamkela iindwendwe zam kwaye ndizenze zizive zisekhaya. Ndiyayihlonipha imfihlo yeendwendwe zam. Ndiyafumaneka nanini na, ukuba kufuneka. Ndiyavuya…